Vans Logo History | Abadali be-Intanethi
Imbali ye logo yeVans
I-Vans yinkampani ezinikele kakhulu ekwenzeni izihlangu kunye nempahla efana ne-sweatshirts okanye i-t-shirts. Abaphulaphuli ekujoliswe kubo bagxile kuluntu lwe-skater, ukongeza kweminye imidlalo yasezidolophini. Uphawu lwale nkampani lusukela ekuqaleni kwale nkampani xa yayiyindawo yokugcina izixhobo ezikolweni eMelika. Kwakungekho de kwango-70 apho ilogo yokuqala yenkampani yenziwa.
Namhlanje, kukho iindlela ezininzi zokuyila izihlangu ezidumileyo ze-Old Skool. Kodwa ekuqaleni kuphela imodeli ezintathu zeeteki zenziwe: blue, obomvu kunye negolide. Ngokungafaniyo ne-logo yeVans, le iye yahlala ingatshintshi ukususela ekusekweni kwayo. Namhlanje sikuxelela ngembali ye logo ye Vans.
1 Imbali kunye nentsingiselo yelogo yeVans
2 Ifonti yelogo kunye nombala
3 umzobo wevans
Imbali kunye nentsingiselo yelogo yeVans
Iivans luphawu lwezihlangu kunye nempahla yezemidlalo eyoyisayo phakathi kwabantu abancinci kunye nabadlali. Imfihlelo yokuthandwa kwayo ilele kwifilosofi yophawu lwayo, njengoko igxile kubantu abaphila ubomi obusebenzayo, njengabatyibilizi. Le nkampani isebenza ukususela ngo-1966. Igama livela kumsunguli uPaul Van Doren ngokwakhe. Ekuqaleni uVan Doren, wenza izihlangu zokuhamba ngenqanawa. Yintoni eyenze ukuba ibambe ingqalelo kuluntu lwe-skater, kuba yayikumgangatho olungileyo kakhulu kwaye idityaniswe kakuhle nezinye iimpahla. Kungelo xesha apho uphawu lwaqala ukukhula ngokukhawuleza.
Izicathulo zokuqala zeVans ziqulethe kuphela igama le-brand njenge-logo, le nguqulo yahlala iminyaka engaphezu kwe-50, de kube yi-2016 xa ihlaziywa ngokukhumbula iminyaka engama-50 kwimarike. I-logo yeVans yenzelwe inkwenkwe eneminyaka eyi-13 egama linguMark Van Doren, wayengunyana womnye wabasunguli.. Le ngcamango yabakho xa wayesenza istencil sokupeyinta kwiibhodi zokutyibiliza. Uyise, ekubona oko akwenzileyo, waqaphela umzobo awayewudalile, wawubeka esithendeni sesihlangu. Kamva, bekuya kuba xa umnini wenkampani ethatha isigqibo sokuzinikezela ngokupheleleyo ekwenzeni izicathulo ze-skate.
Umbono kaPaul yayikukudala i-silhouette yanamhlanje, ithatha impembelelo evela kwi-Converse Chuck Taylor. Babefuna ukwenza uhlobo lwesihlangu esingayi kutyibilika kwaye siza kubamba kakuhle kuzo zonke iintlobo zemigangatho. Iimodeli zokuqala zaziyi-$ 2.49 kunye ne-$ 4.99 kuphela.
Ukuguqulelwa ngokoqobo kwelogo kuvela kwigama elithi «Furgonetas«. I-logo ifakwe kwi-"V", oonobumba "A", "N" kunye no "S", njengokungathi ingcambu yesikweri. Yintoni eyenza ibe yinto ephawulekayo ebonakalayo ye-brand. Ukuze uqonde kakuhle imbali yomqondiso, kufuneka ubuyele kwi-70. Abadlali ababini be-skaters, uTony Alva kunye no-Stacy Peralta babe nengxabano. Owokuqala wabhiyozela ukuba ukwazile ukujikela eludongeni wabhabha emoyeni. Umfana owayelapho ogama linguSkip Engblom wathi ngokoqobo, "Ndoda, usanda kuphuma eludongeni."
Ifonti yelogo kunye nombala
Umzobo we-skateboard awuzange usetyenziswe ixesha elide. Yafumana igama lofudo, ekubeni imilo yalo yayifana neyeqokobhe lesilwanyana. Ekugqibeleni ngo-2016, bakhetha ukuphelisa isimboli se-skateboard kwaye bashiye kuphela isicatshulwa kunye nesimboli. Izicathulo ezenziwe ngeminyaka yee-60 zinethegi emhlophe enombhalo oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngo-2016 bakhetha umbala obomvu kwimvelaphi kunye nomhlophe kwi-typography. Ubomvu bufanekisela amandla kunye nomdla. Ngelixa umhlophe unentsingiselo yokuzola kunye nokucoceka. Le mibala idla ngokusetyenziselwa ukudala isidingo sokuthenga kumthengi. Ezantsi kwelogo kukho i-emblem ethi "Off the Wall".
Ekuqaleni, iileta zelogo azifani, kodwa abaqulunqi bagqiba ukudala i-symmetry. Uhlobo lochwethezo olusetyenziswe kwilogo yeVans luguqulelo olulungisiweyo lwefonti yeHelvetica.. Bonke oonobumba babhalwe ngoonobumba abakhulu, benza iiengile ezichanekileyo. Okwangoku, uphawu lweVans lolona lwaziwayo kwaye lubalaseleyo kumzi-mveliso wezihlangu kwihlabathi liphela.
Yintoni eyenza ukuba le nkampani yamkeleke ubukhulu becala zizinto zegraphic ezihamba kunye neemodeli zezihlangu ezahlukeneyo, omnye wabo waziwa ngokuba yi "Jazz Stripe". Ekuqaleni kwayo yaqala njenge doodle, kodwa yaphela iluphawu lwentengiso olubhalisiweyo lwenkampani. Enye into ephawulekayo yipatheni yayo etshekisiweyo enayo uninzi lweemodeli zayo zesneaker, into ezininzi ezinye iibrendi ezizamile ukuxelisa. Kwakhona kuthiwa iphethini yejometri yokuba i-Vans sole iphuma kwi-"Star of David" eyaziwayo, enye yeempawu ze-quintessential zamaYuda, kodwa oku kungamahemuhemu nje.
Ukuba uyithandile le post kwaye uyathanda ukwazi imbali yeelogo ezaziwa kakhulu, nantsi ikhonkco kwelinye inqaku endikuxelela kulo ibali malunga logo edumileyo Amazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imbali ye logo yeVans